DEG DEG:- Sarkaal ka tirsan nabad-sugidda oo si dirqi ah kaga bad-baaday weerar lagu qaaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Sarkaal ka tirsan nabad-sugidda oo si dirqi ah kaga bad-baaday weerar lagu qaaday
Kooxo hubeysan ayaa daqiiqado kahor xaafadda Carafaad ee degmada Yaaqshiid ku weeraray sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo halkaasi maraayay, iyadoona weerarkaasi aanay jirin cid wax ku noqotay.
Sarkaalkaas oo illaa iyo haatan aan magaciisa helin ayaa xilligii la weerarayay wuxuu watay gaari nooca raaxadda ah, waxaana la sheegay in sarkaalkaasi uu iska caabin xoogan ku sameeyay kooxihii weerarka kusoo qaaday.
Ma jiro wax qasaare ah oo soo gaaray sarkaalkaasi la weeraray, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha nabad-sugidda qaranka ee NISA oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa sheegay inay maqleen rasaas badan oo ay labada dhinac is-dhaafsadeen, waxaana xilligaasi cabsi weyn soo wajahay dadka deegaanka.
Kooxihii weerarka ku qaaday sarkaalkaasi NISA ka tirsan ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee NISA oo halkaasi howlagalo baaritaano ah ka sameeyay.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay dilalka qorsheysan ay si xowli ah ugu soo bateen degmooyinka ka tirsan magaalada Muqdisho, iyadoona dhowr jeer hore ay degmooyinkaasi uga dhaceen falal lidi ku ah ammaanka goobahaas.